I-China Fitness Weight Ukuphakamisa amagwebu kukhuseleko Isiko le-Barbell squat kwiPhedi yoMvelisi wePinki kunye noMthengisi | NQ
I-45 * 10CM
Umgangatho ophezulu, ozinzileyo, olula ukucoceka, ulula
Umbala kunye neepateni:
pinki, bomvu, mnyama, bhlowu
IYoga, uPilato, iGymnastics, iMidlalo njl.
Ewe / iyafumaneka (ubungakanani / ubukhulu / umbala / ilogo / ukuprinta / ukupakisha)
Embossing logo, logo Yoshicilelo, njl.,
Iziqwenga ezili-100000 ngenyanga
Le pad ye-barbell inokufakwa ngokulula kwaye isuswe kuyo yonke i-2 `` ye-Olimpiki esemgangathweni kunye neebhari zomatshini zikaSmith eziluncedo ngakumbi xa utshintshana phakathi kokuzilolonga ejimini.
Esi siponji sogwebu se-barbell sibonisa imitya emibini ekhusela iphedi endaweni yokukunceda ujolise kwimithambo endaweni yokukhathazeka malunga nokutyibilika kwephedi. Inika intuthuzelo ephezulu kunye nokukhuseleka kulwakhiwo lomzimba wakho, ukuphakamisa amandla okanye ukusebenza kweCrossfit.
1.Each nganye nge-opp bag, emva koko uyifake engxoweni. Iseti enye / ibhegi + ibhokisi.
2.Can kube logo siko kwi band / ibhegi / ibhokisi njl
3.Ukuba upakisha ngokukhethekileyo, pls usithumele nge-imeyile.
Q: Ndingawenza njani umyalelo? A: Ungaqhagamshelana naye nawuphi na umntu othengisayo ukuze ufumane iodolo. Nceda unikeze iinkcukacha zeemfuno zakho ngokucacileyo kangangoko. Ke sinokukuthumelela umnikelo ngexesha lokuqala.
Q: Yintoni iphakheji yakho?
A: Sipakisha i-1 pc ngaphakathi kwe-1 polybag kwaye ezinye zikwibhokisi enye, kodwa sikwanokubonelela ngebhegi enemingxunya, ibhegi ye-pu kunye nebhegi ephothiweyo.
A: Ewe, sinokunikela ngesampulu, isampulu yentlawulo sisiseko kwixabiso leesampulu, kwaye kufuneka uhlawule iindleko zempahla.
Q: umzi-mveliso wakho malunga nokulawulwa komgangatho njani?
Phambi komyalelo wendawo yomthengi, siya kuthumela iisampulu nganye kumthengi ukuze zamkelwe.
Egqithileyo IAmazon ithengisa kakuhle uMgangatho oPhezulu weNkxaso yeBelt yoXinzelelo lwePhedi, iNeoprene eQinisekayo yoCinezelo lweBlack Brace
Okulandelayo: I-logo yangokwezifiso ze-TPE ye-yoga, ibhendi yokuxhathisa irabha, ulolonge umzimba weLatex yasimahla ye-theraband
IBarbell Squat iBhedi yamagxa
Iphepha lamagxa eP foam
Ihowuliseyili yoqeqesho lwamaxabiso aphantsi ukomelela komzimba ...
Iimveliso zokuThengisa eziShushu zeGym Fitness Training Wrist ...